梅花 白 2020-10-18 18:42:05
Личное, Разное, Нужна помощь
Hi! I'm Wattpad Writer @PlumWhite_Blossom . Let Sharing Love.
ENDING WITH DEATH
General & His Husband Cross-dresser
Daddy Villain & His Owner Baby Boy
Finally Tibetan Boy have been met his love.
Kelsang ပန်းလေးတစ်ပွင့်က လူတစ်ယောက်အပေါ် လေတစ်ချက်အဝေ့မှာကြွေဆင်းသွားခဲ့တယ်။ ငါးနှစ်ကျော်ကြာ ထိုလူအားလိုက်လံရှာဖွေလို့ သူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြသရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်သိရှိခြင်းမရှိသည့်တိုင် ထိုလူအားချစ်ခင်စုံမက်ခဲ့တယ်။ တစ်ဘဝလုံးစာအတွက်ရည်ရွယ်ခဲ့တယ်။ "ကျွန်တော့်နာမည်က ---- ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုရှာတွေ့ဖို့ ငါးနှစ်တောင်ကြာခဲ့တယ် ခင်ဗျားကတော့ကျွန်တော့်ကိုသိမှာမဟုတ်ဘူး " ဒီလူအတွက်ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်တာအချိန် သူ့ရဲ့နှလုံးသားတစ်ခုလုံး။ "ကိုယ့်မှာအိမ်ထောင်ရှိတယ်" သိခွင့်ကနောက်မကျခဲ့ပေမဲ့ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကတော့မရှိခဲ့ဘူး။ "ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုချစ်တယ် ဆိုတာသိစေချင်ယုံပါ" ပျော်ရွှင်နေတဲ့Kelsangပန်းလေးဟာ ပူပြင်းတဲ့နေရောင်ကြောင့် ညှိုးနွမ်းခြောက်သွေ့လာခဲ့တော့တယ်။
Confession - 4
ချစ်ရတဲ့အကြောင်းတွေက စကားလုံးတွေထက် ပိုပါတယ်။
" ဘယ်လိုချစ်မိသွားတာလဲ "မေးတိုင်း ဖြေစရာစကားမရှိခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ်ကမင်းကိုသဘောကျနေခဲ့တာပါ။ သဘောကျနေတာထက်ပိုနေခဲ့တာပါ။